Wedzera Sales Pop kune Yako Ecommerce Saiti | Martech Zone
Zvemagariro humbowo yakakosha apo vatengi vari kuita sarudzo yekutenga pane yako ecommerce saiti. Vashanyi vanoda kuziva kuti yako saiti inovimbwa uye kuti vamwe vanhu vari kutenga kubva kwauri. Zvakawandisa nguva, ecommerce saiti inogara yakamira uye wongororo dzakashata uye dzekare ... zvichikanganisa sarudzo itsva dzemutengi.
Chimwe chinhu chaunogona kuwedzera, chaizvo, mumaminetsi mashoma iSales Pop. Iyi ndiyo yepasi kuruboshwe popup inokuudza iwe zita uye chigadzirwa icho mumwe munhu akatenga nguva pfupi yadarika. MaPopu Ekutengesa anonyanya kukurudzira kune angangove mutengi anofarira chigadzirwa pane yako saiti asi haazive kana yako saiti inogona kuvimbwa. Nekuona rwizi rwezvazvino kutenga kubva kune vamwe vatengi, ivo vanowana pfungwa yekuti iwe uri wakavimbika e-commerce saiti.
Kugadzira hurongwa seizvi kunogona kunge kuri kunetsa, asi Beeketing yakavaka chikuva chine simba chinobatanidza natively kune Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento, Weebly uye Lightspeed. Uchishandisa AI, Beeketing inokwanisa kunongedza uye kugadzirisa avo maficha ekugadzirisa ese ecommerce kutengesa.
Kana iwe ukashanyira yangu WordPress saiti, iwe unogona kunge usati wamboona kuti ini ndine mabasa chikamu. Vanhu vazhinji havazvizive saka ini ndinongowana mukana wekutengesa mwedzi wega wega. Ini ndakaisa yekutengesa pop uye maminetsi mashoma gare gare chikuva chakanyatsoenderana. Kwete chete yainge yatobata kare kutenga, asi ini zvakare ndakakwanisa kuwedzera zvigadzirwa zvandaida kusimudzira zvimwe.
Mukati mezuva rimwe chete, ndakave neimwe yekutengesa!
The Kutengesa Pop magariro chiratidzo kwete chega chinhu mukati meBeeketing, unogona kuwedzera akati wandei. Zvakanakisisa pane zvese, mitengo inotangira mahara kuitira kuti iwe ugone kuupa bvunzo yekutyaira!
mwe Beeketing ecommerce maficha anosanganisira:
Boost Sales - Upsell uye Cross-kutengesa mazano
Zvakasarudzika Zvinokurudzirwa - kurudzira zvigadzirwa uye kuwedzera kukosha kukosha.
Coupon Bhokisi - Wedzera kutengesa nemapoponi popups.
Dzorera Cart Pusher - browser ziviso dzekusiiwa kwengoro.
Currency Converter - otomatiki chinja mitengo yekutengesa kwepasi rese.
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Mobile Converter - kuwedzera mabhurawuza efoni.
Help Center - hwindo rekutaura kubatsira vashanyi.
Anofara Mutumwa - yakagadzirirwa Facebook Messenger kusangana.
MailBot - yemhinduro dzeemail dzakasarudzika.
Email inofara - maemail ekutenda kubva kumuridzi wechitoro.
Countdown yekutengera - kugadzira pfungwa yekukurumidzira pakutengesa.
Checkout Kuwedzera - ita kuti vanhu vagovane zvavakatenga pasocial media.
Paunosaina kusaina, ivo zvakare vanokupa iwe yekuendesa chinongedzo ... saka pano ndeyangu:
Tags: ngoro yakasiyiwaecommerce chatecommerce mazanomwenjeweeblyWeebly uye Mwenje